Java for Everyone- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
ကျနော်က Java ကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာနေတာ ပါ
Taiwan မှာ နေပါတယ်
ှအခု SCJA exam ဖြေ မလို့လေ့ လာ လိုက်တာ Java တွေ အားလုံး ရှုပ် ထွေ ကုန် ပါ တယ်
ဖြစ်နိုင် ရင် ညီအ ကိုတို့လမ်းပြပေးစေချင် ပါတယ်
reply ကိုမျှော် လင့် လျှက်..............
ကျမ java programming ကို basic က နေစ ပြီး လေ့လာချင် လို့ကူညီကြပါနော်။ဘယ်လောက် ပင်ပန်းချင် ပင်ပန်းပါစေ၊ဘယ်လောက်ဘဲခက်ခဲပါစေ Java ကို လေ့လာချင်ပါတယ်။basic ကနေစပြီး ပြောပြပေးပါလားဟင်။ email က [email protected] ပါ။
အစ်ကို JPro ရေ
ကျွန်တော်က တော့ Java ကိုအထူးစိတ်၀င်စား ပါတယ်။ ခုလဲလေ့လာနေပါတယ် ကျောင်းမှာ 1 နှစ်လောက်သင်ဖူး တယ် selection တို့ iteration တို့ ကတော့ အရမ်းကို ရင်နှီးနေပြီ ဒါပေမဲ့ advanced တက်ဖို့ မရောက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဘယ်အဆင့်မှန်းလဲ မသိဘူး ကျွန်တော်က website ရေးတဲ့အပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်ချင်တာ ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်သလဲ
သင်တန်း တက်သင့်သလား self-study လုပ်လို့ကော မရဘူးလား ဘယ်လိုလေ့လာသင့်သလဲဆိုတာ ပြောပေးပါအုန်း
ကျွန်တော်က အခုမှ Gusto မှာ software solution with java စလေ့လာနေတာပါ။ ပြီးရင် j2ee ဆက်တက်မလို့။အဲဒါ database နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာကိုလေ့လာရမလဲ သိချင်လို့ပါ။ mysql ကို လေ့လာရင် ကောင်းမလားလို့ သိချင်လို့ပါ ။ အကူအညီ ပေးပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဲJava က စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့ Language ၁ခုပါ။ ဒီလိုလေး Forum လေးတင်ပေးတဲ့ အတွက် (http://www.mysteryzillion.org/member.php/6271-JPro.Zack) JPro.Zack (http://www.mysteryzillion.org/member.php/6271-JPro.Zack)
ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Java Exam ကို ဖြေချင်ရင် မြန်မာမှာ မရပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံမှာတော့ ဖြေလို့ရနိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြု ပြီး Java Mock Exam နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေရှိရင် share ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
I haveaproblem with my web application...
I would like to remove/ delete the cookie which I set...
I searched on the internet for how to delete the cookies...
I found how to delete ..
Therefore pls let me get the way to delete the cookie.
ညီမလဲ အခု java ကို စလေ့လာနေတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် အခက်အခဲလေးတွေတွေ့တယ် ညီမတို့ကျောင်းမှာက VB ရောသင်တာလေ အဲ့တော့ အားလုံးရောနေတာ။ ညီမက java ကို စိတ်၀င်စားလို့ စလုပ်နေတာပါ။ java ကို မြန်မာလိုလေ့လာနိုင်တာလေးတွေ ပြောပြပေးပါလား။ အကူညီတောင်းတာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေ။ error တတ်ရင်တော့ error ရေးပြီး ပို့လိုက်မယ်နော်...
netlync wrote: »
[FONT=&quot]MySQL ကိုလေ့လာတာ ကောင်းပါတယ် .. Database Engine ကလဲ Free ရတယ် .. သူနဲ ့တွဲသုံးဖို ့IDE ကလဲ Free ရတာရှိသလို Pirate တွေလဲ ရှိပါတယ် .. ဥပမာ .. Navicat9Lite ။ နောက်ပြီး Java နဲ ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်လဲ .. MySQL ကတော်တော် အဆင်ပြေပါတယ် .. ( ဟီး ကျွန်တော် က DB ဆို MySQL နဲ့Oracle ပဲ သုံးဖူးတယ် ။ Oracle ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း MySQL လောက် သုံးရတာ အဆင် မပြေဘူး ) ။ဒါပေမယ့် Database ကိုလေ့လာမယ် ဆိုရင် DBMS Type ကို အရင်ခွဲတာထက်စာရင် Database ရဲ ့အခြေခံသိရမယ့် အချက်တွေ ( ဥပမာ .. Database , DBMS နဲ ့Application that use Database မတူညီပုံတွေကို အရင်သိတာ ပိုကောင်းလိမ့်မယ် လို ့ကျွန်တော် မြင်ပါတယ် .. ။ ) အဲဒါတွေ အတွက် Optimum Computer Center က လုပ်တဲ့ Relational Database Management System ဆိုတဲ့ class လေးကို ညွှန်းချင်ပါတယ် ။ ( ကျွန်တော် တော့ မတက်ဖူးပါဘူး .. ဒါပေမယ့် သူကြေငြာ ထားတာတွေသာ တကယ် .. Introduction လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်သင်တယ်ဆို တန်ပါတယ် .. Fee 70000 က ) ။ သူက သင်တန်း အသစ် ကို November Second Week မှာ ဖွင့်မှာပါ .. ။ ကျွန်တော် အဲဒီကြေငြာ ဖတ်မိတော့ .. ကျွန်တော် ဒီလောက်အလုပ်မများခင်မှာ အဲဒီသင်တန်းမျိုးလေး တက်ထားမိရင် တော် တော် ကောင်းမှာပဲ လို ့တွေးမိတယ် .. ။ အဲဒါလေး လာမျှဝေတာပါ .. ဟဲဟဲ .. အခမဲ့ ကြေငြာခြင်းပေါ့ ။ နောက်ပြီး DBA ကလွဲလို ့ကျွန်တော်တို ့လို Junior Developer .. ဒါမှ မဟုတ် အခုမှ စလေ့လာမယ့်သူတွေ အတွက်က ဘယ် DBMS ဆိုတာက သိပ်အရေးမကြီးသေးပါဘူး .. ။ Database , DBMS နဲ့Application that use Database တွေကိုသာ သေသေချာချာ နားလည်ဖို ့လိုတာပါ .. နောက်ပြီး Database နဲ ့ပတ်သတ်ပြီး သေသေချာချာ မသိဘဲ Application တွေ စမ်းရေး ကြည့်ကြတဲ့ အခါ ( School Project ) Database ကို Black Box အဖြစ်ပဲ သုံးပါတယ် .. ။ Table ဆောက် .. Data သိမ်း ..အလွန်ဆုံး View .. ဒီလောက်ပါပဲ .. ။ အမှန်က database feactures တွေကိုသာ အတော် သေး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးနိုင်မယ် ဆိုရင် ( Store Procedure .. Store Function .. Trigger ) Application ဘက်မှာ တော်တော် လေး ပေါ့သွားတာပါ .. ။ နောက်ပြီး အဲဒီ feactures တွေကလဲ SQL feacutre တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် DBMS တိုင်းမှာ ရပါတယ် .. ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးသာ နဲနဲ ကွဲတာပါ .. ။ အဲဒီတော့ SQL basic နဲ ့SQL elements တွေရဲ ့logic and usage တွေကို ကျွမ်းကျင်အောင် အရင်လေ့လာ သင့်ပါတယ် ။ အဲဒါတွေ ပြီးရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် ..ဒါမှ မဟုတ်လဲ အပြိုင် ( အခု က Parallel Processing ခေတ်ကြီး မဟုတ်လား ) ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့လာမယ် ဆိုရင်တော့ MySQL က တော်တော် လေး အဆင်ပြေပါတယ် .. MySQL ကို လေ့လာမယ် ဆိုရင် MySQL Engine နဲ ့MySQL IDE ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိရပါတယ် .. ။ MySQL Engine ကတော့ MySQL Website မှာ free download ရပါတယ် .. ( မြန်မာ နိုင်ငံတော့ မပါပါ ။ ရအောင် ကျော်ပြီး ဒေါင်းပါ ) .. ။ MySQL IDE ကတော့ MySQL9Lite ကို ညွန်းပါတယ် .. ။ ([/FONT][FONT=&quot]http://download.cnet.com/3001-10254_4-10870715.html?spi=4b35eeb3be89c0216bd87c4ff3d4b214[/FONT][FONT=&quot]) ဒီမှာ ဒေါင်းပါ .. ) ။ အဲဒါပြီးရင် MySQL ကို Install လုပ်ပြီး လေ့လာထားတဲ့ Create Table တွေ .. Create View တွေ .. Create Trigger တွေကို MySQL ရဲ ့command line client က နေ စမ်းနိုင်ပါတယ် .. ။ Navicat ကို Install လုပ်ပြီးရင်လဲ Navicat ကနေတဆင့် Table တွေ View တွေ Store Procedure .. etc တွေ ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် .. ။ ဒါပေမဲ့ .. အဓိက က .. How မဟုတ်ပါဘူး .. What နဲ ့Why ပါ ... ။ ဥပမာ .. Store Procedure တစ်ခုကို Database တစ်ခုထဲမှာ Create လုပ်တော့မယ် ဆိုပါစို ့။ ဘယ်လို လုပ်မယ် ဆိုတာက Reference တွေ တစ်ပုံကြီးရှိပါတယ် .. သင်တန်းတွေကလဲ အဲဒါကို အဓိက သင်ကြပါတယ် .. ။ ဒါပေမဲ့ .. Store Procedure ဆိုတာ ဘာလဲ .. ဘာလုပ်ပေးတာလဲ .. ဆိုတာ က How ထက်ပို အရေးကြီးပါတယ် .. အဲဒါလည်း သင်တန်းတွေမှာ သင်တော့သင်ပါတယ် .. သိပ်တော့ သေသေချာချာ မသင်တော့ဘူး .. ( ကျွန်တော် တက်ဖူးတဲ့ သင်တန်းတော်တော် များများ ) ။ အရေးအကြီးဆုံးက Why ပါ .. ဘာလို ့ကျွန်တော်တို့Store Procedure ကို သုံးတာလဲ .. ။ မသုံးရင် ဘယ်လို ဆိုးကျိုးဖြစ်မှာမို ့လို ့လဲ .. .. သုံးလိုက်ရင် ဘယ်လို အကျိုးတွေ ရမလဲ .. Pros and Cons ပါ ပါလာပါပြီ .. ။ နောက်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ သုံးသင့်သလဲ .. ( ဥပမာ .. Database Structure နဲ ့Application က ဘယ်လို ဆိုရင် Store Procedure သုံးလိုက်ရင် .. ဘယ်လို အဆင်ပြေသွားမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ .. ။ ) အဲဒါတွေကို သိဖို ့က .. DBMS တစ်ခု ကို Operate လုပ်တက်ဖို ့ထက်ကပို အရေးကြီးပါတယ် .. ( DBA လိုင်းသီးသန် ့မဟုတ်ရင်ပေါ့ .. ) ။ အဲဒါတွေ ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်ကို Thread တစ်ခုမှာ သက်သက် ရေးပါဦးမယ် .. ။ ဒါတွေကို ပိုအာရုံစိုက်ပြီး .. selected DBMS အနေနဲ ့MySQL ကို လေ့လာမယ် ဆိုရင် ပို ပြီး အဆင်ပြေမယ်လို ့ထင်ပါတယ် .. ။[/FONT]
CuperSky wrote: »
Java ကို မြန်မာလို လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ .. ဆရာ ကျော်ဇေယျာလေး ( ကသာ ) ရေးတဲ့ Java စာအုပ်ရှိတယ် .. ။ မြို ့ထဲ က ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို ့ရမှာပါ .. ။ အခု Vol2တောင်ထွက်နေပါပြီ ..။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆီမှာ ယူကြည့်တာတော့ မဆိုးပါဘူး .. ဘာမှ နားမလည်သေးတဲ့ လူတွေ Java နဲ ့Program ဆိုတာကြီးကို စရေးချင်တဲ့ လူတွေ အတွက် တောင် အဆင်ပြေအောင်ရေးပေးထားပါတယ် .. ။ Java ကိုလေ့လာတာကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမယ့် .. Java ကိ်ု သေသေချာချာ နားလည်ချင်တယ် ဆိုရင် Java ကိ်ု တည်ဆောက်ထားတဲ့ concept ဖြစ်တဲ့ OO ( object - oriented technology ) ကိုလည်း သေသေချာချာ နားလည် ထားသင့်ပါတယ် .. ( ဘာလို ့Inheritance လုပ်လဲ .. Static Polymorphism ဆိုတာ ဘာလဲ .. Dynamic Polymorphism ဆိုတာဘာလဲ ဘယ် အချိန်မှာ Dynamic Polymorphism ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်သလဲ .. စတာတွေပေါ့ .. ) ။ အဲလို မဟုတ်ရင် .. ကဲရော့.. Inheritance ဆိုတာ အမွေ ဆက်ခံတာ .. Parent Class က Feacture တွေကို Child class က ရတာပေါ့ .. Java မှာ Inheritance လုပ်ချင်ရင် extends ဆိုတဲ့ Keyword ကိုသုံးရတယ် .. ဥပမာ .. distance1 ဆိုတဲ့ class ကနေ distance2 ဆိုတဲ့ class က inherit လုပ်လိုက်ရင် distance1 ရဲ ့feacture တွေကို distance2 ရဲ့object ကနေတဆင့် ခေါ်လို ့ရတယ် .. ဆိုတဲ့ Answer လောက်နဲ ့ကြေနပ်ရပါလိမ့်မယ် :P .. အဲဒါကြောင့် OO ရဲ ့core feacture လောက်တော့ နားလည်ထားသင့်ပါတယ် .. ။ Java Class တွေမှာ သင်တဲ့ Object Oriented Concept ဆိုတာနဲ ့မလုံလောက်ပါဘူး .. OO အတွက် စာအုပ်သပ်သပ် ဖတ်သင့်ပါတယ် .. OO Design ဆိုတာ သက်သက်ရှိပါသေးတယ် .. သင်တန်းတွေမှာ OO လို ့ပြောနေပေမယ့် .. တကယ်သင်ကြတာက Button Driven တွေပါ .. ( အထူးသဖြင့် C# , VB ) .. နောက်ပြီး .. Error တွေက ညီမ ကို တကယ့် Programmar ဖြစ်အောင် ကူညီပေးမယ့် တကယ့် ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေပါ .. အဲဒါတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ရှာပြီး တကယ့် Programmer ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ် .. ) ။ Error များများတက် .. များများ ဖြေရှင်းနိုင်လေလေ .. မြန်မြန် Programming Language တစ်ခုရဲ ့အထာကို ပို နပ်လာလေလေ ပါပဲ .. အမှန်တကယ်ဆို ညီမ မေးသင့်တာက .. Error အမျိုးအစားတွေနဲ့ဘယ်Error ဆို ဘယ်လို ချင်းကပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ .. Approach Methods တွေပါ .. အဲဒါတွေက လည်း သိပ် အများကြီးမရှိပါဘူး .. .. ( Tough time never last .. but Tough People do .. ) .. ဆိုတာလေး က Programming မှာလဲ . မှန်ပါတယ် .... Errors တွေ အားလုံးရဲ ့အဆုံးသတ် သာ Solution နဲ ့Fixed ဆိုတာပါပဲ .. ။ အဲဒီတော့ Error တက်လာခဲ့ရင် .. နောက် ၁နာရီလောက်ကို အာရုံပြုကြည့်လိုက် .. သြော် နောက် ၁ နာရီဆို .. ငါဒီ Error ကို ရှင်းပြီးသွားပြီ .. ငါ ကျေနပ်သွားပြီ .. လို ့မြင်သာကြည့် .. Programmer တစ်ယောက် Error ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က ဘာနဲ ့မှ မလဲနိုင်လောက်အောင် ကြည်နူးဖို ့ကောင်းပါတယ် .. .. ကြိုးစားပါလို ့တိုက်တွန်းပါရစေ .. ။